गुगलमा 'फटाहा' सर्च गर्दा किन केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको तस्बिर देखिन्छ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशगुगलमा 'फटाहा' सर्च गर्दा किन केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको तस्बिर देखिन्छ?
गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको तस्बिर देखिन्छ?
प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगल सर्च इन्जिनमा गएर तपाईंले यति बेला नेपालको फटाहा भनेर सर्च गर्नु भयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुर्व प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अगाडि आउँछ । देउवा हालै असार २९ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिन बित्दा गुगलमा ‘फटाहा इन नेपाल’ अथवा ‘फटाहा अफ नेपाल’ भनेर सर्च गर्दा उनको नाम र फोटो देखाउन थालेको हो । यसको कारण के हो तरु के गुगलमा देखिएको यस्तो घटना यो नै पहिलो घटना हो?
जसले गर्दा गुगलले अमेरिकी कंग्रेसको न्यायपालिका समितिमै त्यसको जवाफ दिनुपरेको थियो । त्यस्तै सन् २०१९ मा इमरान खान पाकिस्तनको नयाँ राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएसँगै उनीमाथि पनि त्यस्तै घटना भएको थियो ।
त्यतिबेला गुगलमा ‘भिखारी’ भनेर सर्च गर्दा पाकिस्तानी राष्ट्रपती खानको फोटो देखाउने गरेको थियो । सन् २०२० मा अफगानी क्रिकेटर रासिद खान र भारतीय नायिक अनुष्का शर्मालाई जोडेर गुगलमा त्यस्तै घटना घटेको थियो ।
यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले उजुरी दिएपछि गुगलले तत्कालै यसलाई सच्याउने गरेको पनि गरेको छ । तर, यसरी कुनै शब्दसँग जोडेर व्यक्तिलाई देखाउनुको पछाडिको कारण के हो तरु
कुनै समूहले चाहेर मात्र पनि हुने होइन । किन भने यसमा धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रयोगकर्ताले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयले निर्धारण हुने कुरा पनि पिचाईले बताएका थिए ।
Previous articleउपेन्द्र यादव समूहमा लागेका सांसदले पाए सनसिटी अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट
Next articleजनकपुर- जयनगर रेल्वे ट्रयाकको भारतीय एकडब्बे रेलबाट स्पीड टेस्ट गरियो
चिनियाँ नागरिक जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा जेल बाट छुटाउन घुस दिदा एक जना पक्राउ
बंगलादेशमा अहिले पनि पाकिस्तान विरोधी आन्दोलन जारी !
अफगानिस्तानमा तालिवान कब्जा गर्दा राजधानी काबुलमा २५७ सञ्चारमाध्यम बन्द
पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दु तथा क्रिश्चियन किशोरीहरुलाई जबरजस्ती इस्लाममा धर्म परिवर्तन